Bixby hadda waxaa laga helaa 200 oo dal, laakiin waxaa keliya oo ku qoran Ingiriis iyo Kuuriyaan | Androidsis
Bixby hadda waxaa laga helaa 200 oo dal, laakiin waxaa kaliya lagu heli karaa Ingiriis iyo Kuuriyaan
Berri, Arbaco, Ogosto 23, mid ka mid ah daahfurka ugu badan ee sanadka ayaa dhici doona, kaas oo ah nooca loo yaqaan 'Galaxy Note 8.' Si kastaba ha noqotee, ka hor inta aan la gaarin xilligaas, shirkadda Koonfurta Kuuriya Samsung waxay ku fidineysaa kaaliyeheeda dalxiiska ah Bixby aduunka oo dhan.
In kasta oo ay tani tahay war aad u wanaagsan, xaqiiqadu se waa sidaas kaliya kuwa isticmaala ee ku hadla Ingiriisiga iyo / ama Kuuriyada Waad ku farxi kartaa maxaa yeelay kaaliyaha Bixby waxaa kaliya lagu heli karaa labadan luuqadood.
Bixby: adduunka oo dhan laakiin aad u xaddidan
Hubaal ku filan, kaaliyaha dalwaddii Samsung ee Bixby ayaa maanta sii ballaaranaya Dalalka 200 sidaas awgeed u oggolaanaysa dadka isticmaala inay xakameeyaan qaar ka mid ah shaqooyinka taleefannadooda casriga ah iyagoo adeegsanaya amarrada codka ee ku saleysan luuqadda dabiiciga ah.
Ilaa hadda, Bixby Voice Waxaa laga heli karay oo keliya Koonfurta Kuuriya iyo Mareykanka, laakiin hadda dadka isticmaala Galaxy S8 iyo Galaxy S8 Plus adduunka oo dhan way awoodi doonaan, in kastoo hadda, Bixby kaliya wuxuu fahmaa luuqadaha Ingiriiska iyo Kuuriya. Xaqiiqdii, marka lagu daro, Samsung ayaa ka digaysa taas Bixby wali ma fahmayo lahjadaha, lahjadaha, iyo muujinta waliSidaa darteed, hawlgalkeedu ma noqon karo mid boqolkiiba boqol wax ku ool ka noqda dalal kala duwan oo ay wadaagaan Ingiriisiga, sida Boqortooyada Ingiriiska, Kanada, Australia ama Koonfur Afrika.
Sidaa darteed, haddii aad leedahay Galaxy S8 ama Galaxy S8 Plus oo luqaddaadu tahay Ingiriis ama Kuuriyaan, waad bilaabi kartaa isticmaal kaaliyaha codka Bixby adoo riixaya badhanka in Samsung si cad loogu soo daray qalabkan.
Dhinaca kale, waxay umuuqataa in howl gelinta lagu fulinayo wajiyo, marka hadaad isku daydo inaad dhaqaajiso Bixby oo aadan ku guuleysan, samir yar oo isku day in yar kadib.
Berri ah Galaxy Note 8 kaas oo sidoo kale yeelan doona badhanka Bixby sidaa darteed tallaabada maanta waxay umuuqataa mid loogu talo galay inay kordhiso xiisaha loo qabo terminalka cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Bixby hadda waxaa laga helaa 200 oo dal, laakiin waxaa kaliya lagu heli karaa Ingiriis iyo Kuuriyaan
Micromax wuxuu soo bandhigayaa Canfin Infinity, oo ah taleefan casri ah oo qiimo jaban leh oo leh shaashad 18: 9 ah
Fiidiyowga ugu horreeya ee muuqaalka 'Huawei Mate 10' wuxuu xoojinayaa kamaradda laba-geesoodka ah ee moobiilka